Gobolada | Aqalka.com
Dhul iiba ah
Beer iib ah
Goof iib ah
1- Awdal:- wuxuu ka kooban yahay afar degmo oo kala ah
2- Banaadir oo magaalo madaxda muqdisho
3- Bari oo isaguna wuxuu ka kooban yahay 11 degmo
5- Sool wuxuu isaguna ka kooban yahay afar degmo
6- Galguduud wuxuu isna ka kooban yahay sideed degmo
Gobolada admin - October 18, 2021 0
6- Galguduud wuxuu isna ka kooban yahay sideed degmo. dhuusa mareeb oo caasimada gobolka ah cadaado alad balanbale ceelbuur ceeldheeren caabud waaq gel hareeri AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida...
18- Nugaal wuxuu ka kooban yahay afar degmo
Gobolada admin - October 17, 2021 0
18- Nugaal wuxuu ka kooban yahay afar degmo garoowe waa caasimada gobolka dangorayo ayl burtinle AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib ama...
16- Sanaag wuxuu ka kooban yahay afar degmo
16- Sanaag wuxuu ka kooban yahay afar degmo ceerigaabo waa caasimada gobolka ceel afweyn laasqoray badhan AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib ama...
10- Mudug isaguna wuxuu ka kooban yahay shan degmo
10- Mudug isaguna wuxuu ka kooban yahay shan degmo gaalkacayo oo caasimada gobolka ah galdogob xara dheere hobiyo jiriiban AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul...
13- Bay wuxuu ka kooban yahay shan degmo baydhabo waa caasimada gobolka buurxakabo diinsoor qansaxdheer AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib ama kiro...
8- Gedo wuxuu isna ka kooban yahay lix degmo
8- Gedo wuxuu isna ka kooban yahay lix degmo garbahaarey oo caasimada gobolka ah baardheere beledxaawo doolow ceelwaaq luuq AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul...
7- Hiiraan wuxuu isna ka kooban yahay shan
7- Hiiraan wuxuu isna ka kooban yahay shan baladweyne waa caasimada gobolka buula barde jalalaqsi masax matabaan AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib ama...
4- Togdheer oo isaguna ka kooban afar degmo
4- Togdheer oo isaguna ka kooban afar degmo burco waa caasimada buuhoodle shiikh oodweyne AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib ama kiro ah...
15- Jubada dhexe wuxuu ka kooban yahay afar degmo
15- Jubada dhexe wuxuu ka kooban yahay afar degmo bu'aale oo caasimada ah dujuma jilib saakow AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib...
14- Bakool wuxuu isna ka kooban yahay shan degmo
14- Bakool wuxuu isna ka kooban yahay shan degmo xudur waa caasimada gobolka ceelbarde rab dhure tiyeglow biyooley AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib...
Dhulkaan waa iib waxuu kuyaalaa jazeero $600 dollar
Dhulkaan waa iib waxuu kuyaalaa jazeero Mogadishu Somalia, waa Dhul banaan ah cabirka waa 20×20 Lacagta lagu rabana waa $600 Nala Sooxiriir Qeybta whatsappka ama emailka Whatsapp...
17- Jubada hoose wuxuu ka kooban yahay shan degmo
12- Shabeelada hoose wuxuu ka kooban yahay todoba degmo